Baarlamaanka Puntland oo kulan ka yeeshay dilkii Caaisho Ilyaas – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa weli socota hadal heynta dhacdadii lagu kufsaday laguna dilay Caaisho Ilyaas Aadan oo oo aheyd gabar 12 jir ah taas oo meydkeeda habeen ka hor la dhigay afaafka hore hoygooda oo ku yaalla Waqooyiga Magalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug.
Baarlamaanka Puntland ayaa Maanta kulan deg deg ah waxa uu ka yeeshay dhacadada gabadha yar lagu dilay taas oo aheyd falkii lagula kacay mid aad looga naxay.
Qaar ka mid ah Xubnaha Golaha Wakiilada Puntland oo Warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay aad uga xun yihiin dhacdadaas naxdinta leh ee lagula kacay Caaisho Ilyaas Aadan,waxaana Hay’adaha amniga Puntland ka dalbadeen in ay si deg deg ah u soo qabtaan cadaaladana u horkeenaan dadkii ka dambeeyay.
Waxa ay ka digeen in ay soo baxaan dad difaac u noqonaya hadii gacanta lagu dhigo dadkii falkaasi naxdinta leh kula kacay Gabadha yar,isla markaana laamaha amniga ay waajibaadkooda ka gutaan.
Tan iyo markii ay soo baxday falka kufsiga iyo dilka isugu jira ee lagula kacay Caaisho Ilyaas Aadan ayaa Ciidamada Booliska Puntland waxa ay wadeen howlgallo ay ku baadi goobayaan dadkii ka dambeeyay falkaas,waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan inay jiraan ilaa 8 ruux oo loo qabtay kiiskaas.
Somali President travels to Qatar